केन्याका बारमा नेपाली चेलीको चित्कार - Namaste Times
शनिबार, साउन ०४, २०७६ | Friday, June 28, 2019
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आषाढ १३, २०७६ समय: ८:३६:५९
काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली संघका कोषाध्यक्ष हिक्मत थापाले बिहीबार यस्तो ट्वीट गरे– ‘दशकदेखिको समस्या। केन्या र तान्जानियाका कैयन मुजरा डान्सबारमा निरन्तर सयभन्दा बढी नेपाली चेलीहरु नाचिरहेका छन्। यातना दिने, पुलिसले पक्रने यो पहिलो पटक होइन। सरकार, दूतावास सबैलाई बारम्बार जानकारी गराइएको छ। सरकारको नजर पुगोस्।’
केन्याको न्यालीस्थित न्यु रंगीला बारमा राति नाचिरहेका अवस्थामा प्रहरीले हालै छापा मारेर १२ नेपाली युवतीलाई पक्राउ गरेको हो। त्यसका सञ्चालक असिफ अमिराली अलिभाइ जेथालाई पनि गिरफ्तार गरी मुद्दा चलाएको छ।
पक्राउ परेका युवतीहरूले बताएअनुसार उनीहरू काठमाडौं ठमेलका बारमा नाच्थे। नेसनको समाचारमा ४ युवतीका मार्मिक पीडा समेटिएको छ। तीमध्ये एक युवती ७ सन्तानमध्ये जेठी हुन्। लगातार जन्मिइरहेका भाइ–बहिनीलाई हेर्नुपर्ने बाध्यताले उनले ७ वर्षमै स्कुल छाडिन्। उमेर छिप्पिने र जिम्मेवारीले थिच्ने क्रममा नाचमा लागिन्।
काठमाडौं पुगेर बारमा नाच्दै केही कमाइरहेकी उनले अचानक एक एजेन्ट भेटिन्। विशाल नामको उक्त एजेन्टले भन्यो, ‘केन्या गयो भने धेरै कमाइ हुन्छ। फिल्ममा खेल्ने कलाकारको काम पाइन्छ। के गछ्र्यौ ? ’ विदेश सपना उनको पनि थियो। त्यसमाथि कलाकार बन्ने अवसर ? प्रलोभनमा परिन्। केही दिनमै उनको पासपोर्ट आयो। टिकट आइपुग्यो।
गत वर्ष नोभेम्बर १२ मा केन्या पुगेकी उनलाई असिफले एयरपोर्टबाट लगे। एउटा अपार्टमेन्टमा राखे। र, नाच्ने काममा भर्ना गरे। पासपोर्ट खोसिएकी उनी यसरी फसिन्।
न्यू रंगीला अत्यन्त महँगो डान्स क्लब हो। यहाँ सम्भ्रान्त र चिरपरिचित व्यक्ति मात्र छिर्न पाउँथे। बाहिर कुनै संकेत नभएको उक्त इलाकामा नचिनेको व्यक्ति जानै पाउँदैन थियो। त्यहाँ कार्यरत युवतीहरूलाई ग्राहकमार्फत् यौन दुव्र्यहारसमेत गरेको पाइएको पत्रिकाले लेखेको छ।
‘उनीहरू टुरिस्ट भिसामा ल्याइन्छन् र बन्दक बनाएर राखिन्छन्’, यस्ता घटना देख्दै र त्यसविरुद्ध ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थापा भन्छन्, ‘प्रहरीले कहिले काहीं छापा मार्छ। पैसाले कुरा मिलिहाल्छ। यदाकदा मात्र उठाएर लैजाने हो।’
त्यहाँका बारमा हिन्दी गीतमा नेपाली यवतीले नाच्ने गर्छन्। अति कम पारि श्रमिक दिँदा हुने भएकाले नेपालीको मानव तस्करी बढेको हो। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
तेस्री युवती पनि पारिवारिक बाध्यताले सानैमा स्कुल छाडेकी हुन्। उनलाई एजेन्टले असिफसँग सिधै कुरा गराएर पठाएको थियो। ‘मैले एक महिनाको तलब पहिल्यै चाहिन्छ भनें’, उक्त पत्रिकाका प्रतिनिधिसँग उनले भनेकी छन्, ‘टिकट र पैसा पठाइदिए। घरको ऋण तिरेर यता आएँ। यो नर्कमा फसें।’
अर्की महिलाले स्कुल छाड्नासाथ बिहे गरिन्। श्रीमान् सहितको सल्लाहमा पैसा कमाउन विदेश उडिन्। मानव तस्करीको जालोमा परेर केन्या पुगिन्। र, डान्स बारमा काम गर्न बाध्य भइन्।